Glasklart Go ကို Apex အဓိကအကြောင်းအရာ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Glasklart Go ကို Apex အဓိကအကြောင်းအရာ
Glasklart Go ကို Apex Theme APK ကို
ဤသည် Go ကိုဖွင့်တင်, Apex Launcher ကို, Nova Launcher ကို, ADW, & တခြားသူတွေကို MacThemes.net အပေါ်ဝေါဟာရသော Glasklart icon တွေကိုတစ် port ဖြစ်သည်။
ဒီအပြင်အဆင် 550 + icons များ & ရေတွက်ပါရှိသည်! ငါဒါငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်သင်ရေးရာတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်ထားတဲ့ app ကို icon တွေကိုအကြံပြုမှတ်ချက်ထားခဲ့ဖို့အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီးအိုင်ကွန်တောင်းဆိုမှုများကိုယူပါ။
မှတ်စု! အားလုံးကတော့ 550 + icon များ icon များစာရင်းထဲတွင်ပေါ်လာပါသည်။ ငါစာရင်းမှတဆင့် scrolling ရသောအခါသုံးနေပြီကာကွယ်တားဆီးဖို့ကဒီကိုပြု၏။ ငါကိုယ်တိုင်ပေါ်လာဖို့အကောင်းဆုံး icon တွေကိုရွေးချယ်ဖို့ကွိုးစားပါ။
ငါ Go ကိုတင်ပေးသူကို အသုံးပြု. လျှင်အကြီးစားမှအိုင်ကွန်အရွယ်အစား setting အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဤသည်ကို standalone app ကိုမဟုတ်ပါ, သင်ထုံးစံ themes များခွင့်ပြုထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ Go ကို, Apex, Nova, အဖြစ် launcher လိုအပ်ပါတယ်။
1 ။ Go ကိုဖွင့်တင်, Apex, ဒါမှမဟုတ် Nova (အားလုံးအခမဲ့) Install
2 ။ ဒီဆောင်ပုဒ် Install
3 ။ လျှောက်ထားဖြစ်လျှင်, launcher ရဲ့ဆောင်ပုဒ် setting များကိုမဆိုအတွက် Glasklart ကိုရှာပါ။
နိုဝင်ဘာလ 10, 2016 မှာ 6: 56 ညနေ
ဇွန်လ 22, 2013 မှာ 9: 32 နံနက်
themes များ download, says:
ဇွန်လ 19, 2013 မှာ 5: 16 ညနေ
ကိုယ့်ဟာ android ပေါ်မှာဤဆောင်ပုဒ်ကြိုးစားရန်လိုခငျြ
ဇွန်လ 8, 2013 မှာ 10: 31 ညနေ
Excel post ကိုနှင့်ဆောင်ပုဒ်, ဒါပေမယ့် link ကိုကျိုးသည်🙁ကကျေးဇူးပြုပြီး fix
ဇွန်လ 8, 2013 မှာ 10: 57 ညနေ
Link ကိုပြဿနာ fixed ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ 4, 2013 မှာ 7: 10 နံနက်
ငါ Download ပြုလုပ်လို့မရပါဘူး။